In Guul Darada Aysan U Qalmin, In Leo Uu Dunida Ugu Fiican Yahay & Conte Oo Fariin Culus U Diray Wiilashiisa %
Tababaraha kooxda kubada cagta Chelsea, ninka lagu magacaabo Antonio Conte ayaa wuxuu ka hadlay guul daradii kooxdiisa kasoo gaartay dhigeeda Barcelona, taasoo ay uga soo hareen guud ahaanba tartanka Champions League.
Lionel Messi oo labo jeer shabaqa soo taabtay iyo Osman Dembele oo dunida tusiyay inuu uqalmo in lagu soo iibsado 105 Milyan oo Yuuroo ayaa kala daray difaacadayaasha horyaalka koowaad ee aduunka ugu xiisaha badan.
Sikastaba, Conte oo ciyaarta kadib la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu ka dhawaajiyay, in Leo Messi uu yahay ciyaaryahanka aduunka ugu fiican, sidaas darteeda farqiga udhaxeeya Barcelona iyo Chelsea uu yahay isaga oo qura.
“Waxaan ka hadleynaa shaqsi sanad ciyaareedkiiba dhaliyay wax ka badan 60 gool, inaad haysato Messi, ayaa wax aan caadi ahayn, waa ciyaaryahan aan inaba caadi ahayn, waana ciyaaryahanka dunida ugu fiican,” ayuu Conte kulanka kadib yiri.
“Marka aan wajahayso koox walba oo kasoo horjeeda oo ay haysata shaqsi lamid ah Lionel Messi, waa inaad wax aan sameysaa, waana sameyn wax walba oo aan awoodno,” ayuu hadalkiisa kusii daray macalinkaan reer Italy.
Natiijada ciyaarta ayuu ka yiri: “Waxaan umaleynaa in natiijadu ay ahayd mid aan cadaalad ahayn, maxaa yeelay waxaan abuurnay fursado badan, waxaan ahayn kuwa gacanta sare ee kulanka lahaa, wax badan ayaan garoonka ka baqanay.
“Gool farqi ah ayaan haysanay, kaasoo wax badan naga caawin karay, laakiin waxaad umaleyneysaa inay dhaceen wax aan uqalmin,” ayuu raaciyay.
Isagoo la hadlayay ciyaartoydiisa ayuu yiri: “Iyaga ayaan ku kalsoonahay, waxayna iitahay mid sharaf ah inay iyaga ila shaqeynayaa.
“Waxaa waajib nagu ah inaan sii wadno inaan si wada jir ah aan udagaalano, waana sii wadi karnaa,” ayuu kusoo gaba gabeeyay hadalkiisa macalin Conte.
Sikastaba, Chelsea, ayaa waxay hada xooga saari doontaa sidii ay xili ciyaareedka dambe ay ugu soo bixi lahayd Champions League, inkastoo rajada ay ka leedahay midaas ay umuuqato mid liidata, maadaama kaalinta Shanaad ay fadhiso.
Barcelona vs ChelseaConteLeoMessi